ကြည့် ရှု သူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ ဗြောင်းဆန် သွားစေ မယ့် မမဆောင်း ရဲ့ အသဲယား စရာ ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ကြည့် ရှု သူတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ ဗြောင်းဆန် သွားစေ မယ့် မမဆောင်း ရဲ့ အသဲယား စရာ ဗီဒီယိုလေး
မင်း သမီး ကြီး ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်း ဟာ ဆယ် စုနှစ် လောက် က ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများ စွာနဲ့ ကြော်ငြာတွေ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ကာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည် ထား ခဲ့တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ယ ခု နောက် ပိုင်း မှာတော့ ချစ်တဲ့ ပရိသတ် တွေ က လည်း မမဆောင်း လို့ ချစ်စနိုး နဲ့ ခေါ်နေ ကြပြီး တစ်ခေတ် ပြန်လည် အောင်မြင် လာခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ လက် ရှိ မှာလည်း ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်း ဟာ အနုပညာ အလုပ်တွေ အနေနဲ့ ကြော်ငြာလေး တွေအပြင် photo shootingတွေ ကို ဆက် တိုက်ရိုက် ကူး နေရတာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ် ။
သူ မ ဟာ ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ အလှ တရား တွေနဲ့ ဂစ်တာရှိတ် လေးလို အချိုးအစား ပြေပြစ် တဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ချစ်စရာ ကောင်းနေ တာဖြစ် ပါတယ် ။ ဒါ့ အ ပြင် အနုပညာ ကိုဝါသနာကြီး လွန်းတဲ့ ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်း က အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေနဲ့ ချစ် စရာ tik tok လေးတွေ ကို မကြာ ခဏဖော်ပြပေး တာတွေ့ ရ ပါ တယ် ။ ယခုမှာ လည်း ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်း က ရိုက်ကူးရေး လုပ်ရင်း ဆော့ကစား ထားတဲ့ သူမ ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေး ကို တင်ပေး လာခဲ့ပါ တယ် ။
ဒီဗီဒီ ယို လေး ထဲမှာတော့ ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်း က ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ဟန်အမူအရာ လေးတွေနဲ့ မြင်သူ တိုင်း ချစ်အား ပိုအောင် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဆော့ကစား ထားတာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒါ့ အပြင် ဝတ်ဆင် ထားတဲ့ ဖက်ရှင် ဝတ်စုံလေး က သူမရဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရားတွေနဲ့ လိုက်ဖက် နေတာ တွေ့ရပါ တယ် ။ ပရိသတ်ကြီး ရေ လူငယ်တွေ လို ပေါ့ ပါး လွတ်လပ် စွာ နဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းလောက် အောင် ဆော့ကစား ထားတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ Tik Tok လေး ကို ပြန်လည် ကြည့်ရှု့ လို့ရအောင် ဖော် ပြပေး လိုက် ပါ တယ် နော် … .
မင္း သမီး ႀကီး ေဆာင္းအိေျႏၵထြန္း ဟာ ဆယ္ စုႏွစ္ ေလာက္ က ဗီဒီယို ဇာတ္ကားမ်ား စြာနဲ႔ ေၾကာ္ျငာေတြ ကို ရိုက္ကူး ခဲ့ကာ နာမည္ တစ္လုံး နဲ႔ ရပ္တည္ ထား ခဲ့တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ယ ခု ေနာက္ ပိုင္း မွာေတာ့ ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ ေတြ က လည္း မမေဆာင္း လို႔ ခ်စ္စနိုး နဲ႔ ေခၚေန ၾကၿပီး တစ္ေခတ္ ျပန္လည္ ေအာင္ျမင္ လာခဲ့ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ လက္ ရွိ မွာလည္း ေဆာင္းအိေျႏၵထြန္း ဟာ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ အေနနဲ႔ ေၾကာ္ျငာေလး ေတြအျပင္ photo shootingေတြ ကို ဆက္ တိုက္ရိုက္ ကူး ေနရတာ ကို ေတြ႕ ရ ပါ တယ္ ။
သူ မ ဟာ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိတဲ့ အလွ တရား ေတြနဲ႔ ဂစ္တာရွိတ္ ေလးလို အခ်ိဳးအစား ေျပျပစ္ တဲ့ ကိုယ္လုံးေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းေန တာျဖစ္ ပါတယ္ ။ ဒါ့ အ ျပင္ အႏုပညာ ကိုဝါသနာႀကီး လြန္းတဲ့ ေဆာင္းအိေျႏၵထြန္း က အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြနဲ႔ ခ်စ္ စရာ tik tok ေလးေတြ ကို မၾကာ ခဏေဖာ္ျပေပး တာေတြ႕ ရ ပါ တယ္ ။ ယခုမွာ လည္း ေဆာင္းအိေျႏၵထြန္း က ရိုက္ကူးေရး လုပ္ရင္း ေဆာ့ကစား ထားတဲ့ သူမ ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုေလး ကို တင္ေပး လာခဲ့ပါ တယ္ ။
ဒီဗီဒီ ယို ေလး ထဲမွာေတာ့ ေဆာင္းအိေျႏၵထြန္း က ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ ဟန္အမူအရာ ေလးေတြနဲ႔ ျမင္သူ တိုင္း ခ်စ္အား ပိုေအာင္ ေပါ့ေပါ့ ပါးပါး ေဆာ့ကစား ထားတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒါ့ အျပင္ ဝတ္ဆင္ ထားတဲ့ ဖက္ရွင္ ဝတ္စုံေလး က သူမရဲ့ ပင္ကိုယ္ အလွတရားေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ ေနတာ ေတြ႕ရပါ တယ္ ။ ပရိသတ္ႀကီး ေရ လူငယ္ေတြ လို ေပါ့ ပါး လြတ္လပ္ စြာ နဲ႔ ခ်စ္စရာ ေကာင္းေလာက္ ေအာင္ ေဆာ့ကစား ထားတဲ့ မမေဆာင္းရဲ့ Tik Tok ေလး ကို ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈ႔ လို႔ရေအာင္ ေဖာ္ ျပေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ကြည့်ရှု သူတွေ ကို ရင်ခုန် အောင် လုပ်လိုက်တဲ့ ရွှေရင်အစုံ လေးတွေပေါ်လွင် နေတဲ့ ပိုပိုရဲ့ အမိုက် စား ဗီဒီယိုလေး
Next post လှပလွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို အထင်းသားမြင်နေရအောင် အလန်းစားလေး ရိုက်ပြထားတဲ့ Mဆိုင်းလုရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေး